१७ माघ, बैतडी । कोरोना कहरको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । महाकारीका बेला गरिएको बन्दाबन्दीका कारण धेरैले रोजगारी गुमाए भने व्यापारसमेत गर्न पाएनन् । लामो समयदेखि सीमानाका बन्द हुँदा सीमा क्षेत्रका व्यापारी पलायन हुन थालेका छन् । कोरोना कहरका कारणले व्यापार व्यवसाय चौपट बनेपछि भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाटका व्यापारी पलायन हुन थालेका हुन् ।
उनले भने, “नाका खोल्ने विषयमा हामीले नेपाल सरकारको निर्णयसहित जानकारी गराइसकेका छौँ । नेपाल सरकारले नाका खुला गरेको भए पनि यसमा भारतीय पक्ष सहमत भएको छैन ।” लामो समयदेखि नाका बन्द हुँदा सीमावर्ती बजारका व्यापारीले भने व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
१५ वर्षकी किशोरीलाई १८ जनाभन्दा बढीले गरे ९ दिनसम्म बलात्कार !
सुनको मूल्य घट्यो, शुक्रबार कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
मौसम पूर्वानुमानः आज हिमपातको सम्भावना
थपिए १ हजार ५६२ कोभिड संक्रमित, १९ जनाको मृत्यु
म्याद नाघेको खाद्य सामाग्री बेच्ने बिशाल ग्रुपको वेभसाइट बन्द
ग्यापुले ल्यायो ब्ल्याक फ्राइडे सेल, ६० प्रतिशतसम्म छुट पाइने
मुम्बई इण्डियन्स आईपीएलको फाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं महानगरबासीलाई आजदेखि एष्ट्राजेनिका खोप दिइँदै
फेरि बर्डफ्लुको त्रास, पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य वस्तु आयातमा रोक
२०७७ असार २२ गते सोमवार